लडाकु समायोजन गरेर शान्ति पूर्ण राजनीतिमा आउने माओवादीको कुनै योजना नै नभएको मधेसी फोरमका उपेन्द्र यादवको दावी (२०६७ म‌सिर २, बुधवार)
काठमाडौ। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लडाकु समायोजन गरेर शान्ति पूर्ण राजनीतिमा आउने माओवादीको कुनै योजना नै नभएको दावी गर्नुभएको छ ।
माओवादीसँग नजिक मानिनु हुने अध्यक्ष यादवले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना साक्षात्कारमा भन्नु भयो-माओवादको लडाकुको समायोजन गर्ने कुनै योजना नै छैन । उनीहरु त राज्यको सेवा सुविधा लिएर शिविरमा तालिम दिएर उपयूक्त मौकामा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा छन् ।
यादवले माओवादीले संसदीय ब्यवस्थालाई प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिलाई नै केन्द्र बनाएकोले समयस्या आएको दावीसमेत गर्नु भयो ।साक्षात्कारमा उहाँले राज्य कोषबाट भत्ता खाएर शिविरमा बस्ने लडाकुहरु कुनै पार्टी विशेषको हुनै नसक्ने दावी गर्दै लडाकुहरु माओवादीको विस्तारित बैठकमा सहभागी भए त्यो शान्ति सम्झौता विरुद्ध हुने ठोकुवा गर्नु भयो ।
उहाँले प्रश्न गदै भन्नु भयो- दानापानी राज्यको खाने अनी काम चाँही पार्टीको गर्ने ? त्यस्तो हुन सक्दैन, पार्टीको काम गर्ने हो भने राज्यको दानापानी छाडेर पार्टीको काम गर्न जानु भयो । त्यस्ताको समायोजनको पनि कुनै औचित्य छैन ।
शिविर छाडेर बाहिर जाने लडाकु बास्तविक लडाकु नभएर कार्यकर्ता मात्र हुने ठोकुवा गर्दै त्यस्तो भएको अवस्थाले सेना समायोजन हुँदैन भन्ने प्रष्ट पार्ने दावी गर्नु भयो ।
यादवले राज्य पनि अर्कमण्यताको अवस्थाबाट बाहिर आउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै शिविर छाडेर जाने लडाकुलाई अब पार्टीमा जाओ भनेर राज्यले भन्न सक्नु पने बताउनु भयो ।
ठूला राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई भन्दा सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण अहिलेको अवस्था आएको दावी गर्दै यादवले संविधानमा रहेको मतभेद अन्त्य गर्न गठित कार्यदलले पनि सोही कारण केही गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले संविधान निर्माणमा रहेका मुलुभुत मतभेदहरु शासकीय स्वरुप, राज्यको पुर्नसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीको विषयमा प्रवेश नै नगरी समान्य विषयमा कार्यदल अल्झेको भन्दै कार्यदलको आजसम्मको छलफलमा भएको भूमि सम्बन्धी छलफल पनि उपयूक्त हुन नसको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नु भयो-जग्गामा हदबन्दी लगाउनु भन्दा कृषिको बैज्ञानिकिकरण, औधोगिकरण र उत्पादकत्व बढाने रणनीति तय गर्दै प्रगतिशिल कर लगाउनु पर्छ । जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उहाँले कार्यदलले यसरी नै आफूलाई अगाडि बढाउने हो भने बाँकी समयमा पनि संविधान बन्न नसक्ने भन्दै अहिलेको रबैया बाट दलहरु संविधान बनाउन चाँहदैनन कि भन्ने आशंका बढेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो-तीन दलले संविधान लाई मुख्य विषय नबनाएसम्म नेपालमा संविधान बन्नै सक्दैन ।
तीन दलले मुलुकको हित हुने खालको केही काम नगरेको भन्दै उहाँले तीन दलले खोजेको हित मुलुकको हित हुन नसक्ने दावी गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो- अन्य दललाई उपेक्षा गरेर समाधान निस्कदैन । तीन दलले तीन करोड नेपालीलाई दुख दिने काम गरेका छन् । यीनैको कारण गणतन्त्र समेत धरापमा पर्ने अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सम्बन्धमा दिएको फैसलाप्रति लक्षित गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको चयन संसदले गर्ने सर्वोच्च अदालतले गर्नै नसक्ने ठोकुवा गर्नु भयो ।
यादवले सर्वोच्चले कसैलाई निर्विरोध घोषणा गर्न नभनेको दावी गर्दै अहिलेको प्रक्रियाबाट निकास आउदैन मात्र भनेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो- सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो भने अहिलेसम्मको निर्वाचनको नाटक किन रच्नु पर्थ्यो र ।
उहाँले अहिलेको अवस्थालाई सहमतिबाटै संविधान संसोधन गरेर खोज्नु पर्ने भन्दै अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकले निकास नपाउने ठोकुवा गर्नुभयो ।
अहिलेसम्म ६७०९४५३८ पटक भिजिट गरियेको छ । प्राविधिक सहयोगी संस्था - बेष्ट नेपाल प्रा. लि.